Soosaarayaasha Soosaarayaasha - Shirkadaha Soo Saara Shiinaha, Warshadaha
Xarkaha koontaroolka xukunku waa sokad xariif ah oo leh jadwalka barnaamijka, soo bandhigida iyo xakameynta wareejinta. Waxay buuxin kartaa cabirka korantada korantada sida korantada, xawaaraha, awood firfircoon, mugga, iwm, cabirka tamarta, soo bandhigida xogta, xakamaynta soosaarka, iwm shirkadaha iyo hay'adaha.
Mitirka biyaha ee caqliga leh waxay u isticmaalaan kontoroolka waalka caqliga leh sida miiska salka .Maalinta MCU ee sanduuqa qalabka optoelectronic, moduleka isgaarsiinta iyo wareegga koontaroolka ee sanduuqa miiska. soo saarey oo soo saaray shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamo ee GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224.
Mitirka tamarta 3phase 4wire (fogaan) waa badeecad cabbiraad tamarta cusub oo ay soo saarteen shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008 iyo GB / T17215.323-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Mitirka tamarta ee loo yaqaan '3wse 4wire mitir tamarta horay loo sii diyaariyey (kaarka' IC) 'waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta tamarta oo ay soo saarteen shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008 iyo GB / T17215.323-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Terminalka kormeerka tamarta korantada ayaa inta badan loo isticmaalaa sedex weji isticmaalka tamarta, waxaana lagu qalabeyn karaa howsha isgaarsiinta RS485 iyo howsha isgaarsiinta wireless, taas oo ku haboon adeegsadayaasha inay fuliyaan awooda, aruurinta iyo maareynta isha fog. Shayga wuxuu leeyahay faa'iidooyinka saxnaanta sare, cabirka yar, iyo rakibaadda fudud. Waxaa lagu ridi karaa si dabacsan oo loogu qaybin karaa santuuqa qaybinta si loo xaqiijiyo cabirka loo isticmaalo tamarta, tirakoobka iyo falanqaynta aagag kala duwan iyo xamuul kala duwan.
Terminalka kormeerka tamarta korantada ee korantada (4 kanaal) waa badeecad cabbiraha tamarta cusub oo ay soosaartay shirkaddeena. Alaabtaani waxay isticmaashaa wareegyo isku-dhafan oo balaaran iyo geedi-socodka wax soo saarka SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Saddex weji LCD wuxuu soo saaray shaashadda dhijitaalka ah ee firfircoon ee mitirka tamarta elektiroonigga ah ee shaqeyneysa oo leh rs485
Waxaa la geliyay qalab saddex geesood ah oo leh howlo badan, nooc qalab koronto oo caqli badan leh oo leh cabbiraada barnaamijka, soosaarida, isgaarsiinta RS485 dijitaalka iyo soosaarka tamarta korantada, awood u leh cabirida korantada, awooda hadda jirta, firfircoonida, awooda falcelinta, cabirka xoogga, soo noqnoqoshada, cabirka tamarta , muujinta xogta, ururinta iyo gudbinta, waxaa si balaadhan loogu adeegsan karaa qalabaynta iswada, iswada qaybinta, dhismayaasha caqliga leh, iyo cabirka tamarta, maamulka, iyo qiimeynta shirkada. Cabbirka saxda ah waa heerka 1, ka warqabka LCD ama barta internetka ee LED-ka iyo isgaarsiinta isgaarsiinta casriga ah ee RS485. Waxay la jaanqaadi kartaa DL / T645-2007 borotokoolka iyo borotokoolka isgaarsiinta MODBUS-RTU.